RASMI: Xiddigaha Ku Tartami Doona Abaal-marinta Golden Boy Ee Da'yarka Ugu Wanaagsan Dunida Oo Lagu Dhawaaqay - Gool24.Net
Waxa si rasmi ah loogu dhawaaqay xiddigaha liiska gaaban ee ku tartami doona abaal-marinta ciyaartoyga ugu wanaagsan da’yarta dunida ee ‘Golden Boy’, taas oo sannad walba la bixiyo.
Wargeyska fadhigiisu yahay waddanka Talyaaniga ee Tuttosport ayaa soo saaray liiska 40ka ciyaartoy ee abaal-marinta sannadkan ku loollami doona, kuwaas oo soo maray jaran-jarooyin hore oo ciyaartoyda liisatadoodu lagu soo kala yareeyey.
100ka ciyaartoy ee murashaxiinta ah oo markii hore lasoo saaray ayaa waxa laga soo xulay 60ka laacib ee ugu wanaagsan, waxaana mar kale lagu noqday qiimaynta bandhiggooda iyo waxqabadka laacibiintan, waxaana laga tuuray 40 ciyaartoy iyadoo tirada tartameyaasha laga dhigay 60 ciyaartoy.
Mar kale ayuu wargeyska Tuttosport liiska gaabiyey, waxaana hadda lasoo xulay oo lagu dhawaaqay 40ka ciyaartoy ee tartameyaasha ah, kuwaas oo ay ku jiraan inta badan da’yarta ka ciyaarta qaaradda Yurub ee kasoo dhex muuqday naadiyada waaweyn.
Shanta horyaal ee waaweyn ee Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A iyo Ligue 1 ayaa tirada ugu badan ka helay liiska ciyaaryahannada u sharraxan abaal-marintan, laakiin intaas kuma koobna waxaana jira ciyaartooyo kale oo ka yimid kooxo ka dhisan waddamada kale ee qaaradda Yurub.
Akhriso 40ka ciyaartoy ee murashaxiinta ah ee Tuttosport ay soo saartay:
Dennis BORKOWSKI, RB LIPSIA
Jonathan Christian DAVID, LILLA
Amine Ferid GOUIRI, NIZZA
Tanguy-Austin Nianzou KOUASSI, BAYERN